Coral Reef: အားနာတတ်သော အတ္တလူများ (၃)
noblemoe said on July 1, 2010 at 8:04 AM
အားနာတတ်တဲ့စိတ်ကလည်းခက်တယ်နော် ပင်ကိုယ်ဗီဇကပါလာတတ်တော့ပျောက်ဖို့ ခက်တယ်။
Rita said on July 1, 2010 at 8:08 AM
(“အားနာတယ်” ဆိုတဲ့ စကားဟာ လူတန်းစားမရွေး၊ အသက်အရွယ်မရွေး၊ အားလုံးအတွက် လိုအပ်နေပေမဲ့၊ ဒီ့ပြင် ဘယ်ဘာသာစကားမှာ မရှိဘဲ ဒို့မြန်မာစကားမှာသာ ရှိခဲ့တာ)
အဲဒီ စကားကို ကြားဖူးခဲ့တယ်။
ဟုတ်ပါ့မလားလို့လည်း အမြဲ တွေးမိတယ်။ ကိုယ်က ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်တဲ့သူ မဟုတ်တော့ အဖြေ အတိအကျတော့ မရဘူးပေါ့။
ဥပမာ- တရုတ်စာမှာ သဒ္ဒါမရှိဘူး ပြောကြတယ် မဟုတ်လား။ ဒါပေမဲ့ သဒ္ဒါရယ်လို့ သီးသန့် မရှိရင်တောင် သဒ္ဒါသဘောကတော့ ရှိတာပါပဲ။ ဒီလိုပဲ အားနာတယ်ရယ်လို့ တိုက်ရိုက်စကားလုံး မရှိရင်တောင် (မရှိတာတောင် ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား တွေးမိတယ်) အားနာတယ်ဆိုတဲ့ သဘောတော့ ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
အားနာတယ် ဆိုတာ ကိုယ် နားလည်သလို ပြောရရင် တဖက်လူ အနေခက်မှာ၊ ကိုယ့်အတွက်နဲ့ သူ တစုံတရာ နစ်နာသွားမှာကို ငဲ့ညှာလိုတဲ့ သဘောပဲ မဟုတ်လား။ ဒါကတော့ လူမျိုးနဲ့ချီပြောရင် လူမျိုးတိုင်းမှာ ရှိမယ့် သဘောထားပါပဲ။
တဦးချင်းစီနဲ့ ပြောရင်တော့ အနည်း အများ ကွာကောင်း ကွာနိုင်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဝတ္ထုထဲက တင်တင်စီးစီး အားနာပုံမျိုးတွေကတော့ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မြန်မာလူမျိုး တစ်မျိုးပဲ ရှိတယ်လို့ လက်မထောင်ရမယ့် သဘောထားတွေ မဟုတ်တာ သေချာတယ်။
ကိုယ်တော့ ပါးပါးနပ်နပ်နဲ့ ပြန်နှပ်ချလိုက်နိုင်တဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေကို သိပ်အားရတာပဲ။ အဲလိုပဲ ဖြစ်နေရမယ်။ တခါတခါ လုပ်ပြဖို့ လိုကို လိုတယ်။
ပြန်ရိုက်တင်ပေးတဲ့ ဇွန့် ကို သိပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နေ၀သန် said on July 1, 2010 at 8:22 AM
ဟုတ်တယ်... အားနာတယ်ဆိုတာ မြန်မာလူမျိုးမှာပဲရှိတယ်.. ဒါကြောင့်ပဲ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် မြန်မာတွေက အနည်းနဲ့အများ ခံနေရတယ်.... ဒီအားနာတဲ့စိတ်က မကောင်းဘူး...... ကျွန်တော့်မှာလည်းရှိတယ်... တအားပျောက်ချင်တာပဲ...
Rita said on July 1, 2010 at 10:31 AM
ကိုယ်ကပဲ ကပ်သီးကပ်သပ် ကပ်ဖဲ့ တွေးတတ်သလားတော့ မသိဘူး။
ခုလေးတင် ခေါင်းထဲဝင်လာတဲ့ အတွေးတစ်ခုရှိတယ်။
မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ အားနာတတ်ပါတယ် ဘယ်လောက်ပဲ ပြောပြော...
"အားနာတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ကမ္ဘာမှာ မြန်မာလူမျိုး တမျိုးတည်းမှာပဲ ရှိပြီး၊ တခြား ဘယ်လူမျိုးမှာမှ မရှိဘူး" လို့ ပြောဖို့တော့ ဘယ်တော့မှ အားမနာတတ်တဲ့ လူမျိုး ဖြစ်နိုင်တယ် လို့ အတွေးပေါက်နေမိတယ်။
Vista said on July 1, 2010 at 10:42 AM
ရီတာပြောတာ သဘောကျနေတယ်း)
SDL said on July 1, 2010 at 12:24 PM
ဟုတ်တယ်.. အားနာတယ်ဆိုတာကို E လို သိချင်နေတာ..။
မြန်မာပြည်တုံးက ရုံးမှာ တစ်ခုခုအဆင်မပြေရင် ပြန်အကြာင်းကြားဖို့ "Do not hesitate to... " ဘာညာတော့ အီးမေးလ်ထဲ အမြဲထည့်ရေးရတယ်။
ကလည်း အားနာတာ အတိအကျမဟုတ်ဘူးနော်။
Rita said on July 1, 2010 at 2:47 PM
feel free ဆိုတာ အားမနာပါနဲ့ ဆိုတာလို့ ထင်မိပါတယ်။ အားနာတယ်လို့ တိုက်ရိုက်စကား မရှိပေမယ့် အားမနာပါနဲ့ ဆိုတဲ့ အသုံးမျိုးတော့ သတိထားမိတယ်။
အိမ်လာတဲ့ ဧည့်သည်ကို ကိုယ့်အိမ်လို သဘောထားပါ ဆိုတာမျိုး။
(ဆောရီး။ မဆိုင်တဲ့ဘက်တော့ ရောက်ကုန်ပြီ ထင်တယ်။ အားနာလိုက်တာ)
Shinlay said on July 1, 2010 at 8:53 PM
စာကောင်းလေး။ အတွေးကောင်းလေးတွေ အတွက်
အင်ကြင်းသန့် said on July 1, 2010 at 9:56 PM
ဒီတစ်ပုဒ်လည်းကောင်းတာပဲ။ အဲဒီလိုစာကောင်းလေးတွေ ရှိသေးရင် ထပ်မျှဝေပေးပါဦးမမ (စာရိုက်ရတဲ့သူကို အားမနာလျှာမကျိုး) :P
ဇွန်မိုးစက် said on July 1, 2010 at 10:24 PM
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က အားနာတတ်သူမို့ အားနာမိလို့ ခံခဲ့ရတွေရှိတယ်။ ဒီဝတ္ထုဖတ်မိချိန်မှာ ကိုယ်က ကိုးတန်း၊ အဲဒီတော့မှ ဒီစကားလုံးရဲ့ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးအပြစ်တွေကို သေချာစဉ်းစားမိသွားတာ။ အရင်က ပြောရုံပဲပြောပြီး သေချာမတွေးမိခဲ့ဘူး။
မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ မျိုးနဲ့ရိုးနဲ့ချီပြီး အားနာတတ်သူတွေလို့ထင်တာပဲ။
@ရီတာ ... အားမနာပါနဲ့း) ကိုယ်က ဆိုင်တယ်လို့ ယူဆတယ်။ ဟုတ်တယ်... feel free ဆိုတာ အားမနာပါနဲ့ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးသက်ရောက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီစကားလုံးကို လုပ်ငန်းခွင်မှာ၊ အလုပ်သဘောအနေနဲ့ အသုံးများပြီး အပြင်မှာသုံးတာ နည်းတယ်။ နောက်ရီတာပြောသလို ဧည့်သည်ကို ဧည့်ခံတဲ့အချိန်ရယ်။ ဒါနဲ့ စကားစပ်လို့ ရီတာက မြန်မာစာတင်မကဘူး၊ အင်္ဂလိပ်စာပါ ကောင်းတယ်။း)
Wunna said on July 2, 2010 at 8:35 AM
Very Good Writing and Thinking...
Thanks for the post. Looking forward to read more like these.
ချစ်ကြည်အေး said on July 2, 2010 at 5:32 PM
Don't feel bad လို့ သုံးတာလည်း တွေ့ဖူးတယ် တဖက်လူ အနေမခက်အောင် Comfort လုပ်တဲ့ သဘောပါပဲ ၊ အားမနာပါနဲ့ ရဲ့ သွယ်ဝိုက် ဗားရှင်းပေါ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ...။
၃ ပိုင်းလုံး ကြိုက်တယ် ညီမဇွန်ရေ...10Q :)
အပြုံးပန်း said on July 3, 2010 at 11:22 AM
အားနာတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုး မရှိတဲ့လူတွေကိုတော့ ဒီမှာ တကယ်တွေ့ဖူးတယ်၊
ဖတ်ရတာ သိပ်ကောင်းပါတယ် ညီမမိုးစက်၊
Rita said on July 3, 2010 at 4:35 PM
အာာ ကိုယ်eအတော် ညံ့ပါတယ် ဇွန်ရယ်။ ဒီရောက်တော့ ပိုတောင် ဆိုးသွားသေးတယ်။
အိမ့်ချမ်းမြေ့ said on July 4, 2010 at 1:44 PM
ဇွန့်စာဖတ်ပြီး လေးလေးနက်နက်ကြီးဖြစ်ပြီး ပြန်သွားဘီလေ..
အိန္ဒြာ said on July 5, 2010 at 7:14 PM
အားလည်းနာတယ် ခင်လည်းခင်တယ်ဆို ပိုဆိုးးးးးးD